iPhone 7: Inopesana sei nemvura? Kwete zvakanyanya | Ndinobva mac
iPhone 7: Inopesana sei nemvura? Kwete zvakanyanya
Yakafananidzwa | | dzakawanda
Chokwadi chakakosha chekuti isu tinotaura nhasi. Uye ndezvekuti kana isu tisingazive kukwana kwayo uye kugona kwayo, zvingangoita kuti isu tinoityora netsaona. Apple inotivimbisa kuti inoshora kupenya, kuve kunyorova, kunaya zvishoma, kuguruva… Ndingakwanise here kutora mifananidzo mudziva rekushambira? Pasi pemvura, ndinoreva. Iyo iPhone 7 uye 7 kuwedzera inobata kwenguva yakareba sei?
Kunyangwe iyi iri nyeredzi nyeredzi, pamwe nekamera yakavandudzwa uye maviri lens, zvinonyatso kuzivikanwa kuti mafoni emagetsi uye emagetsi zvigadzirwa hazvisi zvine hushamwari hwemvura
1 IPhone 7 inodzivirira mvura, asi chenjera
2 Mukushandisa kwemazuva ese, isu tichanyorovesa sei iyo iPhone 7?
IPhone 7 inodzivirira mvura, asi chenjera
Kana machipisi kana zvemukati zvanyorova vanomira kushanda, kuputsa, ngura uye kumanikidza iwe kuenda kuApple Store kuti utore iPhone nyowani, iyo isingadhuri zvachose. Ndinoziva nekuti mumba mangu iPhone 6 yakawira mumvura uye… Ugh, zuva rinotyisa.
Neraki ma6 ane membrane kuitira kuti isafe zvachose kana ikanyorova, uye ikozvino, pakupedzisira, iyo iPhone 7 uye 7 plus ine kurwisa kukuru kumvura uye guruva. Iine chiyero cheIP67, zvinoenderana neiyo European Union IEC 60529 yakajairwa.
Ehezve, Apple inoyambira zvinotevera mune imwe yemaaster ayo paiyo iPhone 7 webhusaiti:
IPhone 7 uye iPhone 7 Plus inoputika, mvura, uye guruva rinodzivirira. Kuyedza kwakaitwa pasi peanodzorwa marabhoritari mamiriro uye ese mairi modhi akaverengerwa IP67 pasi peIEC 60529. Kuramba kumvura, mvura uye guruva hazvisi zvechigarire uye zvinogona kudzikira nekuda kwekushandisa nguva dzose. Usaedze kuchaja iyo iPhone kana yakanyorova. Tarisa bhuku rekushandisa usati warichenesa kana kuimisa. Iyo waranti haifukidze kukuvara kwemvura.
Mutsara wekupedzisira wakakosha. Ivo vatokunyevera kuti waranti haifukidze kukuvara kunokonzerwa nezvinwiwa, chero zvavari. Kana mukati meiyo iPhone ikanyorova uye ikazokuvara, zvinoda iwe kuti uigadzirise, uye ini ndinoti zvinokutengera nekuti unozoibhadhara muhomwe. Iyo waranti haina mhosva neizvi, sezvo isati yamboita.
Mukushandisa kwemazuva ese, isu tichanyorovesa sei iyo iPhone 7?
Kana zvichibvira hapana. Zvinokurudzirwa kuti usanyorove zvachose. Kwete iyo skrini, kwete muviri wako, kana chero chinhu kana chinhu chinowanikwa. Mukudaro inopokana uye inogona kuponeswa kubva kune chero tsaona senge kudonha kwemushandisi mudziva uchishandisa chipenga. Simba chinhu chimwe chete, kugona kuva mumvura chinhuwo.. Hatisi kutarisana nechiteshi chaunogona kutora kuenda kudziva uye chaunogona kunyora pasi pemvura. Ichi chigadzirwa chakakwidziridzwa chisingazopunzika kana imwe mvura ikawira pamusoro payo kana ukangoikanda mumvura.
Zvirinani pane zvakapfuura, Iyo ine yakanakisa kutaurwa uye mune zvimwe zvinhu senge kamera kana iyo Kumba bhatani iri echimurengaAsi hazvina kusiyana nezvataive nazvo Kana iwe uine iyo iPhone 6 kana 6s, ingave iri 4,7 kana 5,5 inches, ini handikurudzire kuti iwe usvetukire kune ichi chinonzi chizvarwa 7. Zvakafanana dhizaini nemisiyano, uye kuwedzera kwakanyanya kweizvo zvatove zviripo uye nehunhu hwayo. Ini zvechokwadi ndinopokana kana zvakakodzera shanduko kana iwe uine yazvino modhi. Iwe hausi kuzoona mutsauko. Ini ndinofunga zvakafanana nezve Apple Watch Series 1 uye 2, iyo yandakatofananidza. Uye rangarira kuti chizvarwa chechipiri ichi chiri chemvura uye chinogona kunyudzwa kusvika pamamita makumi mashanu.
Iwe unoda isina mvura uye inonyudza iPhone? Iwe uchafanirwa kumirira uye kwete zvishoma. Panguva ino ivo vanovimbisa kuti inogona kupona kuputika uye tsaona, asi havazoigadzirise kana paine chinhu chinoitika kwavari. Nakidzwa netemu yako, ingave yechinyakare kana yazvino, uye uteedzere rairo iyi: Usatore kana kunyorova kana kuiisa muzuva. Mamiriro ekunze anogona kukuvadza kifaa chako, mutauri, mapurosesa, uye bhatiri. Zvichida nekuti inonyorova kana nekuti inopisa zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » iPhone 7: Inopesana sei nemvura? Kwete zvakanyanya
yangu yakanyorova mukati uye haina mvura yakawanda yakawira pairi, mazuva mashoma apfuura yakamira kushanda, iyo skrini yaive nhema uye chete bhatani rekutanga raishanda, nhare yakavhurwa asi haina kupa skrini, uye yainhuwirira kupisa mukati ndinofunga kuti Kana kuri kushungurudzika, ndiani anoziva kana paive nekumwe kukuvara uye kugadzirisa kuchadhura. kuti kunyatso chenjera ndinoti, hazviitike zvakafanana.
Pindura kuna odrich
Ndakairasa mudziva uye foni yangu inoshanda, asi bhatani rekiyi harishande dzimwe nguva uye skrini rinotaridzika kunge risinganzwisisike dzimwe nguva.
Ndine iPhone 7 uye ndakageza nayo mazuva mazhinji, ndakainyudza mumvura, ndakagezesa nayo mudziva riri 2 metres (inofanirwa kuve yakanyanya kusvika 1) uye ndine mavhidhiyo ekushambira mukati dziva uye foni yangu yakakwana, ichokwadi kana iwe uchinyudza iyo kwechinguva kuti mutauri unonzwika kusanzwisisika, asi ndeyekuti mvura yese inobuda uye yakafanana sepakutanga. Ini ndinofunga ichave iri nyaya yemhanza.
Pindura kuna Claudia
Zvakanaka, ndashambira kuAtlantic Ocean ne iPhone yangu, kozoti Pacific Ocean, zvakare Indian Ocean uye hapana chakaitika kwazviri. Ndakadhonzera kwakanyura iyo TITANIC uye hapana chakaitika kwazviriwo. Imwe nguva pandakaidonhedza muchirongo chemvura, yakakuvara uye haichashande.
Apple inogadzira yakachena slate muchirongwa cheTitan
Maitiro Ekutsvaga ePDF mafaera nekutarisa